UCalderón de la Barca kunye no-Anne Brontë babelana ngemihla yokuzalwa | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Inoveli, Inoveli yothando, Ithiyetha
Enye yeedon UPedro Calderon de la Barca, umbhali wemidlalo owaziwayo kunye Inani elikhethekileyo eyethu Ubudala begolide. Enye UAnne Brontë, omncinci koodade abathathu baseBritane abadumileyo kuncwadi. Bobabini bazalwa ngosuku olufana nolwanamhlanje. ICalderón de la Barca ikwenzile oko Madrid, kwi 1600, Kunye no-Anne Brontë kwi Thorton, Yorkshire, kwi 1820.
UMnu Pedro uzuze olona luzuko lukhulu kunye naye idlala yeqonga. Y Anne, Ngaphandle kokuthandwa kakhulu ngoodadewabo abadala uCharlotte noEmily, nabo wema ngaphandle iprozi yakhe. Kodwa bayilima bobabini le vesi, ke namhlanje, kwimemori yakhe, Ndigxininisa imibongo yakhe emibini.
1 ICalderón de la Barca
1.1 Ijoni laseSpain leTercios
2 UAnne Brontë
ICalderón de la Barca
U-Hidalgo, ijoni kunye nomfundisi, u-Pedro Calderón de la Barca wafaka imidlalo engapheliyo efana ne Ubomi liphupha, Usodolophu waseZalamea, I-goblin lady okanye Ugqirha wembeko yakhe. Kodwa ikwanemveliso ebalulekileyo kwimibongo. Le yenye yemibongo yakhe, i-octave eye Ezihlekisayoumnxeba Ukurhangqwa kweBreda.
Ijoni laseSpain leTercios
Lo mkhosi uyawubona
Ndizulazula ndiye kwi-yelo kunye nobushushu,
eyona republic intle
kunye nezopolitiko ezininzi
zehlabathi, ekungekho mntu ulindayo kuzo
ukuba ukhetha unakho
ngenxa yobukhulu belifa,
kodwa ngento ayifumanayo;
kuba nali igazi lidlula
indawo ahlala kuyo
kwaye ngaphandle kokujonga ukuba izalwa njani
kujongeka ngathi iyaqhubeka.
ayisiyonyani; kwaye ukuba unyanisekile,
lihlwempu kwaye lihamba ze ijoni
eyona nto intle kwaye intle;
kuba nantsi into endiyikrokrelayo
ilokhwe ayihombisi esifubeni
ukuba isifuba sihombisa ilokhwe.
Kwaye ke, uzele ukuthozama,
uza kubona endala
ukuzama ukuba ngowona
kwaye ukubonakala kuncinci.
Nantsi eyona iphambili
kwaye kufanele ukuba njani
ayibuzi okanye ayifuni.
Apha, ekugqibeleni, imbeko,
into elungileyo, inyani,
imbeko, into engaqhelekanga,
udumo, imbeko nobomi
ubutyebi amajoni amahlwempu;
kwithamsanqa elungileyo okanye embi
umkhosi mnye nje
inkolo yamadoda anyanisekileyo.
Omncinci koodade abathathu baseCharlotte bahlala mhlawumbi kwisithunzi sikaEmily noCharlotte, kwaye wabelana ngelishwa lakhe ukufa kwangoko. Inoveli yakhe eyaziwa kakhulu ngu Agnes Ngwevu, kodwa ikwasayinwa Indawo yokuhlala yaseWildfell. Nangona kunjalo Imibongo yakhe iyamangalisa, inkoliso yazo wayipapasha ngegama lomgunyathi. Ezi iisampulu ezimbini.
Ewe umkile! Kwaye ungaze uphinde
Uncumo lwakho oluqaqambileyo luya kundizalisa ngovuyo;
Kodwa ndingadlula kumnyango wecawe endala
Kwaye uhambe kumgangatho okugubungelayo,
Ndiyakwazi ukuthwala ingqele, ilitye lengcwaba elimanzi,
Kwaye ukucinga ukuba, otyhafile, ulala phantsi
Intliziyo ezolileyo endakha ndayazi
Olona hlobo ndodibana nalo kwakhona.
Nangona ndingaphinde ndikubone,
Kuyathuthuzela ukukubona okwangoku;
Kwaye nangona ubomi bakho obungapheliyo buphelile,
Kumnandi ukucinga ngento obuyiyo;
Ukucinga ngomphefumlo kaThixo kufutshane,
Ngaphakathi uhlobo lwengelosi entle kakhulu,
Umanyene nentliziyo efana neyakho,
Ukhe wavuya indawo yethu ethobekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » UCalderón de la Barca kunye no-Anne Brontë babelana ngokuzalwa